नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २७ भदौ २०७८)
बिहीबार कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३ दशमलव ४० रुपैयाँ घटेको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ३२६ मा झरेको हो । गत आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रु. ७१ करोड ४७ लाख ५९ हजार रहेको छ । यही नाफाबाट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नेछ ।
यस आधारमा कम्पनीको लाभांश क्षमता ६ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । एनएफआरएस प्रणालीअनुसार कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएपछिको नाफा नै वितरणयोग्य नाफा हो ।
कम्पनीले अघिल्लो आवको मुनाफाबाट गत वर्ष शेयरधनीलाई १० दशमलव २६ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो । कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमासमा रु. १ अर्ब २७ करोड १२ लाख ३३ हजार नाफा कमाएको हो ।
अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रु. १ अर्ब १० करोड ८४ लाख ७३ हजार नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीको ६१ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो ओपनिङ मारुबोजू बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा आगामी दिनमा कम्पनीको कारोबार हालकै प्रवृत्तिमै निरन्तर रहने संकेत गर्छ ।
यद्यपि बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्यले नजिकैको कुनै बिन्दुमा टेवा लिन खोजेको देखिन्छ । आरएसआई ओभरसोल्डजोन २९ दशमलव ६४ बिन्दुमा छ । यसले शेयर बिक्री चाप उच्च रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ५ दशमलव ९३ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा तल छ । बिहीबारको शेयर मूल्य रु. ३२६ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिए रु. ३४० मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ । कम्पनीको यो दिनको मूल्य ६१ कारोबार दिनयताकै न्यून मूल्य रहेको छ ।
स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, ५ असोज २०७८)[२०७८ असोज, ५]